Nagu saabsan - Wuhan XYB Qalabka Sahaminta Cilmiga Jirka 'Co., Ltd.
3 Qeybaha Geophone
Geophone Toosan Iyo Joogto ah
Ogaanshaha Heerkulka Sare ee Omnidirectional
Isku xira Geophone
Isku xiraha Fiilooyinka
Isku-xiraha Xarigga Seismic
Wuhan XYB Qalabka Sahaminta Geophysical Co., Ltd.la diiwaan geliyey lana aasaasay 13-kii Maajo, 2008. Waxay ku taal Wuhan Shiinaha. Shirkaddu waxay u heellan tahay shirkadda R&D, soo-saarista iyo iibinta qalabka baarista batroolka, qodista iyo soo-saarka qalabka, iyo qalabka sahaminta juqraafiyeed. Waxay ka gudubtay shahaadada nidaamka maaraynta tayada ee ISO9000, shahaadada nidaamka maareynta deegaanka, caafimaadka shaqada iyo shahaadada nidaamka maareynta amniga.
Wax soo saarka horseedka geophone sahaminta dhulgariirku wuxuu leeyahay lix taxane, in kabadan 60 nooc. Wax soo saarka ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa batroolka, macdanta iyo baaritaanka cilmiga dhulka, wadada, buundada, biyo xireenka iyo dhismaha tunnelka, gariirka makaanikada culus, kormeerka dhul gariirka iwm.
XYB wuxuu isu keenayaa tayada xirfadeed ee ugu sareysa adduunka iyo teknolojiyadda, wuxuu leeyahay shaqaale caalami ah oo aqoon sare leh.
In kabadan 60 nooc ayaa loo idmay codsiyada patent-ka qaranka, oo ay kujiraan in kabadan 20 shatiyada wax soosaarka, in kabadan 10 nooc oo heer gobol heer sare ah oo cilmiga iyo tiknoolajiyada ah, iyo in kabadan 20 qaran, abaalmarino cilmiyeed iyo tiknoolajiyadeed oo heer qaran ah. Waxay ka gudubtay shahaadada nidaamka maaraynta tayada ee ISO9000, shahaadada nidaamka maareynta deegaanka, caafimaadka shaqada iyo shahaadada nidaamka maareynta amniga.
Suuqa wax soo saarku wuxuu daboolay goobaha waaweyn ee saliida laga soo saaro gudaha iyo dhuxusha, waxaana loo dhoofiyey Yurub, Ameerika, Afrika iyo Koonfur-bari Aasiya iyo in ka badan 50 dal iyo gobol. Qaybta suuqa ayaa ku jirta safka hore ee isla warshadaha Shiinaha. Wax soosaarka tayada leh iyo sumcadda wanaagsan waxay ku xiran yihiin soo dhaweyn iyo ammaan weyn.
Mustaqbalka, shirkadu way sii socon doontaa “saxnaanta, feejignaanta, adkeynta” qaabka ganacsiga, oo leh “isticmaalaha u janjeedha, u samee qiimaha ugu sarreeya isticmaaleyaasha” ujeeddooyinka ganacsiga, oo leh tikniyoolajiyad horumarsan, alaab tayo sare leh, qiimo macquul ah, oo ay weheliyaan macaamiisheennu si ay ula kulmaan mustaqbal ifaya.
Hoyga ayaa ah magac lagu kalsoon yahay xagga caymiska in ka badan 15 sano. Maanta, waxaan si sharaf leh ugu adeegnaa in ka badan 16 milyan oo macaamiil ah waddanka oo dhan.Shelter wuxuu ahaa magac lagu kalsoon yahay xagga caymiska in ka badan 15 sano.
Dabaqa 24aad, Block A, No. 628, Wuluo Road, Degmada Wuchang, Wuhan, Hubei